युगसम्बाद साप्ताहिक - दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश
Sunday, 02.23.2020, 08:17am (GMT+5.5) Home Contact
दर्शना, शाक्य र थापाको सन्देश
Wednesday, 05.24.2017, 11:14am (GMT+5.5)
पहिलो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको विजयी संख्या अनि उम्मेदवारहरूको चयनले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिएको छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयनमा सुझबुझ अपनाए परिणाम पनि त्यस्तै र नअपनाए जनताले विकल्प रोजेका छन् । अझ काठमाडौंका मतदाताले ठूलो परिवर्तन चाहेको सन्देश विवेकशील नेपाली पार्टीकी उम्मेदवार २१ वर्षे रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीको समर्थन पाएका पूर्व सचिव किशोर थापाले पाएको मतले नै देखाउँछ । ललितपुरमा साझाा पार्टीकी उम्मेदवार शोभा शाक्यल पाएको मत पनि अविस्मरणीय छ र यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई ठूलो धक्का दिएको छ । यी उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्दैनन्, त्यो स्पष्ट छ, तर उनीहरूले पाएको मतको विश्लेषण गर्नु दलहरूका लागि हितकर हुनेछ ।
जनताले परम्परागत शैली र सोचमा परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने यी घटनाले नै पुष्टि गरेको छ । जस्तो कि युरोपेली मुलुक फ्रान्समा राजनीतिक दल स्थापना गरेको १३ महिनाकै अवधिमा इम्म्यानुएल म्याक्रोन ३९ वर्षकै उमेरमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । लामो समयदेखि स्थापित रहेका दलका प्रभावशाली र राजनीतिक अनुभव संगालेका नेतालाई पछारेर राष्ट्रपतिमा विजयी म्याक्रोनको त्यो विजय जनताको परिवर्तनको चाहना थियो । यतिबेला नेपालमा यस्तै परिवर्तनको चाहना थियो धेरैको तर, सोचेजस्तो भैरहेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणको मतगणना भैरहेका बेला नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको चाहना राख्नेहरूको उपस्थिति न्यून छ । जनता हरक्षण परिवर्तन चाहिरहेका हुन्छन् तर त्यो परिवर्तन कसरी हुन्छ र त्यसको नेतृत्व कसले लिनसक्छ भन्ने खोजीमा हुन्छन् । आजसम्म जनताले चाहेको परिवर्तन र नेतृत्वले दिएको परिवर्तनको मेल छैन ।
एउटा सुखद सन्देश अहिलेसम्म प्राप्त परिणामका धेरै दृश्यले देखाइरहेको छ । पार्टीका उम्मेदवार भन्दैमा आँखा चिम्लेर भोट हाल्ने परिपाटी भने हट्दैछ । राम्रोा व्यक्तिलाई सबै दलले मत दिएर विजयी गराएका छन् । मतदातामा हाम्रो हैन राम्रो मान्छे छान्ने संस्कृतिको विकास भएको छ । यसले दलहरूलाई राम्रालाई मात्र अवसर दिनुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । अहिलेसम्म नेताका दौराको फेर समातेर चुनाव लड्ने र पैसा र शक्तिको भरमा जित्ने चलन चलिआएको थियो ।
नेपाली जनताले २००७ सालदेखि २०६२।०६३ सालसम्म राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि साथ दिइरहेका छन् । तर, त्यसपछि आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको चाहना भने पूरा हुनै सकेन । सुशासन, भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुराहरू समेत सहज हुन सकेन । जनताको यो सकसलाई पूरा गर्न भन्दै वैकल्पिक शक्तिको नारा घन्काएर दल त खुले तर, तिनीहरू भरपत्यार लाग्दा भएनन् । स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको यो आलेख तयार पार्दासम्मको मतगणनाबाट । नेताहरूले आफूलाई वैकल्पिक भएको घोषणा त गरे तर व्यवहार पुरानै भएको जनताले पाए ।
क्रान्तिको विगुल एकजनाले नै फुक्ने हो । तर, त्यो क्रान्तिको विगुल कर्णप्रिय हुनुपर्छ । कर्णकटु नारा घन्काएर क्रान्ति गर्छु भन्ने हो भने त्यो आफैंमा समाप्त भएर जान्छ । नेताको नीति र योजना सही भयो भने र जनताले परिवर्तन खोजेपछि पाका नेता र पुरानो पार्टी हैन नयाँ नीति र युवा खोज्छन् भन्ने प्रमाणित फ्रान्समा म्याक्रोनको उदयले प्रमाणित भएको छ । स्थानीय निर्वाचनको पहिलो चरणको निर्वाचनताका विश्लेषण अनेक भएका थिए, नयाँ, स्पष्ट योजना र दृष्टिकोण भएका दलका हुन् वा गैरदलीय जनताले तिनलाई नै रोज्नेछन् भनेर । यसपटक अधिकांश नयाँ मान्छे स्थानीय तहमा जाँदैछन् । उनीहरूलाई नै जनताले विश्वास गरे । किनभने अब अब मुलुकको हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ र त्यसका लागि युवा र सक्षम नेतृत्व चाहिन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए नेपालमा । तर, आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा पटकपटक नेतृत्व सम्हालेकाहरू असफल भएको कुरा उनीहरूले स्वीकार्नु पर्दछ । अब यसको जिम्मेवारी नयाँ पुस्तालाई दिन कञ्जुस्याई गर्नुहुँदैन । यसै भएर नेताहरूप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । जनताले अर्को विकल्प खोज्नु अघि नै नेताहरूले विकल्प दिए सबैको भलो हुने थियो । किनभने अभूतपूर्व राजनीतिक परिवर्तन भएको यो एक दशकमा पटकपटक सत्ताको फन्को मारिरहेका नेताहरूको चरित्रमा अहिलेसम्म कुनै सुधार छैन । बारम्बार एउटै फलाको हालेर जनतालाई झुक्याइरहेका छन् । अब यसमा परिवर्तन आवश्यक छ । अब नेताले जनतामाथि आफ्नो हैकम लाद्ने दिन समाप्त हुँदैछ ।
खै त्यो बेलाको जस्तो कूटनीतिक क्षमता (03.22.2017)
खै त्यो बेलाको कूटनीतिक सामथ्र्य (03.14.2017)
शैक्षिक मुद्दा र स्ववियू निर्वाचन (02.28.2017)
माओवादी जनयुद्धका क्रान्ति कि भ्रान्ति ? (02.15.2017)
यही हो शहीदको सम्मान ? (01.31.2017)
टुट्दो राष्ट्रिय एकता र आआफ्नै व्याख्या (01.18.2017)
यसकारण मनाउने पृथ्वी जयन्ती (01.12.2017)
साँच्चैको नेता बनौं न (01.04.2017)
पूर्व राजाको एउटा विज्ञप्तिले हल्लाउँदा (12.29.2016)
यहीँ हो नयाँ नेपाल बनाउने मार्ग ? (12.20.2016)
संघर्ष अखण्डता र विखडनका बीच (12.07.2016)
किन हिस्रक बन्दैछ मानिस ? (11.29.2016)
सीमा काटेको राष्ट्रिय निर्णयको अधिकार (11.23.2016)